IDEs zvePython paLinux | Linux Vakapindwa muropa
Python Iyo, sezvaunoziva, iri nyore chirongwa chemutauro uye kuti uzivi hwayo hunoita kuti kodhi iverengeke yakagadzirwa naGuido van Rossum. Nekuda kwehunhu uhwu, inogona kuve yakanaka chirongwa chirongwa kuti udzidze kana iwe usina ruzivo rwekare. Iyo zvakare ine Python Software Foundation License, inoenderana nedzimwe shanduro dzeGNU GPL rezinesi uye nekudaro iri rakavhurika sosi.
Kune avo vasiri kunyanya mukati memusoro wekuvandudza software uye chirongwa, taura kuti a IDE (Yakabatana Yakasimudzira Nharaunda) Iyo inosanganisirwa budiriro nharaunda, ndiko kuti, kunyorera kana seti yezvishandiso zvinopa zvakafanira maturusi ekuronga nekuvandudza software, pamwe nekurerutsa uye kurerutsa basa neakawanda ekushandisa.
Zvakanaka, kune avo vanoda kutanga muPython, sezvo avo vakapinda munyika ino vatova nevevanoda maIDE, pano isu tinopa matatu maIDE akanaka ePython:
Eclipse nePyDev- Yakagadziriswa neIBM, asi ikozvino inotungamirwa neEclipse Foundation uye inopihwa pasi peyakavhurika rezinesi. Inoshandiswa zvakanyanya mukusimudzira kweJava, kunyange ichigamuchira mimwe mitauro yekuronga seC, C ++, Perl, PHP, nezvimwe. Zvakare, nemapulagi akafanana nePyDev tinogona kushanda nePython.
Eric: ndeimwe yeakanakisa edhita IDEs muPython, uye pamusoro pekugona kushanda nePython, Eric pachake ari kunyorawo achishandisa Python nehurongwa hweQt yeiyo interface SaEclipse, Eric akasununguka uye akasununguka, nekuti inogoverwa pasi peGNU GPLv3 rezinesi.
PyCharm: isu pakupedzisira tine iyi IDE yePython. Iyo inozivikanwa kwazvo, asi icho chigadzirwa chebhizimusi, kunyangwe yemahara uye yakavhurwa sosi vhezheni inopihwa pasi peiyo Apache 2.0 rezinesi.
Pamusoro peaya maIDE, kune dzimwe nzira (PTK, Bluefish, Geany, Spyder,…). Chinyorwa hachiedze kukukurudzira kuti ushandise izvi zvitatu, unogona kushandisa yaunoda uye neiyo yaunonzwa kugadzikana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Wepamusoro Vatatu Vhura Sosi Python IDEs
vakashaiwa, edza http://www.ninja-ide.org/ Iyo zvakare yakavhurwa Sosi uye yemahara
Ini ndasuwa emacs